DEG DEG: Taliyihii NISA ee gobolka Mudug oo Caawa lagu dilay Gaalkacyo | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DEG DEG: Taliyihii NISA ee gobolka Mudug oo Caawa lagu dilay Gaalkacyo
Gaalkacyo (Halqaran.com) – Wararka naga soo gaaraya magaalada Gaalkacyo ayaa sheegaya, in caawa magaalada lagu dilay taliyhii hay’adda nabad sugidda ee gobolka Mudug Xaashi Aadan Cilmi.
Wararka ayaa sheegaya, in taliyaha ay kooxo hubeysan ku dileen Waqooyiga Magaalada Gaalkacyo, iyadoo dilka ka dibna ay ka baxsadeen goobta.
Taliyihii NISA ee Maamulka Puntland Xaashi Aadan Cilmi, ayaa waxaa uu u geeriyooday rasaastii ay huwiyeen raggii soo weeraray.
Wararka ayaa waxay sheegayan in Ciidamada Booliska Puntland ay iminka hawlgal ballaaran ka wadaan Waqooyiga Gaalkacyo, iyagoo ku daba joogga kooxihii dilka gaystay.
Masuuliyiinta Puntland iyo Maamulka Gobolka Mudug ee Puntland ayaan ka hadlin dilka caawa ka dhacay Waqooyiga Magaalada Gaalkacyo, sababo ku aadan dilka oo goor dhow uun dhacay.
Ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay masuuliyadda dilka, balse dilalka ceynkani oo kale ah ayaa waxaa aalaaba sheegta maleeshiyada Ururka Al Shabaab, oo dagaal kula jira Dowladda Federaalka, Amisom iyo Maamul Goboleedyada ka dhisan Dalka.
Dilka ayaa wuxuu ku soo aadayaa, xilli Gudoomiyaha Maxkamadda Darajada 1aad ee Ciidamada Qalabka Sida, Korneyl Xasan Cali Nuur (Shuute) uu maanta gaaray Magaalada Gaalkacyo.
hay’adda nabad sugidda
taliyihii NISA ee gobolka Mudug oo caawa lagu dilay Gaalkacyo